Izimonyo zemvelo ngezandla zabo
Ngekhulu lama-21, izitolo zinikeza izimonyo ezinama-liposomes nama-stem cells, futhi izinkulungwane zabesifazane ngenkuthalo zixuba ama-creams ekhishini labo. Ngokuqinisekile, kukhona okungaqondakali ngalokhu. Noma mhlawumbe, ngokuphambene nalokho, kuyinto evamile ngokuphelele? Ngempela, ngaso sonke isikhathi, izimonyo zemvelo ngezandla zazo zadalwa ngokuthuthumela okukhethekile nangothando. Ngoba kusasazisa.
Abahlaziyi bezinkinga zomhlaba wonke sebevele babalwe izitayela ezimbili eziyinhloko ezingxenyeni zezimonyo. Okokuqala, esikhathini esizayo esiseduze ngeke sivame ukubuyela emakethe amasha wezimonyo: konke uthando nemali kuzoya emakethe abonisiwe. Futhi okwesibili, iningi, le nkinga izoba isisusa sokulungiselela izikhwama ngezandla zabo. Futhi ukwahlulela ngokuthi imfashini yezandla ezenziwe ngezandla ihambelana kakhulu kunanini ngaphambili, kusasaziwa ukuthi yiziphi izitayela ezizoqina.
Ukuqapha, iphuzu elibalulekile: akusikho "ukuxuba i-yolk eyodwa namaconsi amahlanu e-cognac", "uthele emakhazeni e-ice decoction of parsley" futhi "usike ibhanana emibuthanweni, hlala ngemfoloko uphinde usebenzise ebusweni." Lezi zokwelapha zabantu, ziyizinto zemvelo, zihlolwe isikhathi futhi zisebenza kahle. Kodwa azikwazi ukubizwa ngokuthi izimonyo ngokugcwele kwezwi, futhi azikho ezindebe zomuntu wonke namuhla. Izimonyo zemvelo - lokhu akulona i-gruel emikhiqizo embalwa hhayi i-tray yokumnika kwamakhemikhali, kodwa ama-scrubs aphelele, ama-lotions, ama-creams nama-gel ezindaweni ezihlukahlukene zobuso nomzimba. Umehluko omkhulu kusuka ezimonini zezimboni: aziqukethe izidakamizwa, futhi zonke izithako - zemvelo kuphela, ezikhethiwe ngokuqondile isikhumba sakho.
Kubonakala sengathi namuhla, nganoma isiphi isabelomali, ungathenga ibhodlela elihle noma imbiza. Kuyini ukugqugquzela ukuphikisana nezinkezo zokulinganisa nezilinganiso ze-elektroniki, nesifiso sokuxuba, ukuzamazama, ukugxilisa nokuqhuma? Kunezimboni ezimbili zokushayela eziyinhloko.
Ilukuluku. Phakathi kwabesifazane abaneminyaka yonke ubudala kukhona abasebenza ngezandla njalo, abathokozisa ukuncibilika kwe-decoupage, ukwakha isepha, bazizwa behlukumeza ... Okokugcina, ngendlela, kwabaningi - isigaba sokuguquka ekukhiqizeni izimonyo zasekhaya: kunesidingo sokuthuthukisa izikhala ezintsha, futhi isandla sesivele sigcwele. Njenganoma yikuphi ukuzilibazisa okunjalo, ukuxuba ama-creams kunika amabhonasi amaningi kumsizi wesidingo: lapha futhi uxhumana nabantu abafana nalokho, nokuziqhenya kokuziqhenya.
Ukudumazeka. Abaningi balungele ukuzama konke, ngenxa yokuxazulula izinkinga zesikhumba eside. Noma nje ukudumazeka ngezimonyo zezimboni kwanoma yisiphi isigaba ...
Womabili amaqembu ahlanganyela into eyodwa: bonke laba besifazane, uma beqhathanise umphumela wesitolo kanye nama-creams ezenziwe ngezandla, baye bakhetha ngokuzikhethela okwakamuva.
Indima ebalulekile ekuthandeni izimonyo zemvelo ngezandla zazo yadlala yi-fashion world yezempilo nempilo. Lokhu kusebenza empilweni, kokudla, empilweni, futhi, yebo, ubuhle. Njengoba sifundile ohlwini olude lwezithako zomswakama olula, iningi lethu liyakwethuka! Kodwa kuvela: ekubunjweni kwayo kwanele ukubandakanya kusuka ku-0.01% kuya ku-0.5% wezinto ezivela emvelweni - kanti ukhilimu uphenduka kusuka ezimbonini kuya emvelweni.
Yiqiniso, izilondolozi, izigulisi kanye nama-dyes aboniswe kule ilebula zidlule zonke izivivinyo ezikhona futhi azilimazi empilweni. Kodwa ngokushesha kuphakama umbuzo wemvelo: ngani? Kungani konke lokhu kuhlu lwezinto ezingaqondakali, uma ungakwazi nje ukuxuba isikhumba sakho ngezandla zakho siqu?
Ngiye ngazizwa ukuthi kwenzekani.
Kodwa-ke, uma kuziwa ekusebenzeni, kuvela ukuthi "ukukhanya" kanye "nokulula" akuyona into efanayo. Ngokwesisekelo esithile futhi izingxenye eziphilayo ezisebenzayo nakanjani noma yikuphi ukhilimu. Owokuqala uhambisa izinto ezisebenzayo kumaseli esikhumba. Isisekelo sihlanganisa isigaba okuthiwa yi-fat (kungaba ukuhlanzwa amafutha emifino noma ingxube yamaningana) namanzi. Ukuzihlanganisa ndawonye, ​​udinga into - i-emulsifier. Ngokuvamile, yi-lecithin. Manje kusele ukwengeza izingxenye eziphilayo, okuyiqiniso, ezenzelwe ukuxazulula izinkinga zesikhumba sakho: ukucwilisa, ukususa ukuvuvukala, ukulwa nama-radicals mahhala ... Kuningi okwakungenzeka ukuthi izithako ziyaziwa: ama-extracts wamakhambi, amaminerali namafutha abalulekile. Kuzodingeka ufunde izincwadi eziningi mayelana nezakhiwo zamafutha nezitshalo, kuyilapho uzokwazi ukubala ngokuqondile lokho okudingayo. Yamukela masinyane ukuthi ekuqaleni kuyodingeka uchithe amandla amaningi nemali "by." Kunzima kakhulu ukuthola izingxenye ezifanelekile. Kuyoba mnandi ngokwengeziwe uma unenhlanhla futhi ukushaywa kokuqala kulungile.
I-ARSENAL OF BEAUTY.
Ngaphandle kwemfundo ekhethekile, ungenza ukhilimu, kodwa ngaphandle kwemishini ekhethekile - sekuvele kunzima kakhulu. Izigaba zifana nalokho ku-workshop njengasekhishini: ukulungiselela izixazululo nokusabalalisa, ukushisa, ukuxuba ama-aqueous and oil phases (homogenization), ukupholisa ngokuphefumula. Inkinga enkulu yezimonyo zasekhaya ukulingana okwanele komkhiqizo ophelile. Ngempela, ungasebenzisa i-mixer kanye neprosesa yokudla, kodwa baya kuphi kubaperesi abanejubane lokujikeleza elifinyelela ku-26 LLC rpm, lapho kusetshenziselwa khona ukukhishwa kwamakhemikhali ama-creams! Ngakolunye uhlangothi, ekhaya, ukhilimu awunakulungiswa ngobuningi obufana nesitolo, ngakho-ke uma uzama, ungafinyelela ukuvumelana okufisayo ngosizo lwamathuluzi alungisiwe. Ngakho, uzodinga:
• isipuni esenziwe ngensimbi engagqwali noma epulasitiki;
• izimbiza ezincane ezimbili noma ezintathu;
• ikomishi yokulinganisa (engcono yeglasi ekhanyayo). Uma unesithakazelo esikhulu ekwenzeni izimonyo zasekhaya, uthenge iqoqo lezicucu ezintathu: 30, 50 no-250 ml;
• izilinganiso ezinembile kakhulu - ama-pharmacy noma ama-electronic afanelekile;
• I-thermometer enezinga elifinyelela ku-130 ° C;
• i mixer mini (nakuba ngezinye izikhathi kunzima kakhulu ukugubha isitsha esivaliwe ngokuqinile nge-emulsion);
• ipulasitiki noma ingilazi yokulinganisa ingilazi.
Ungakhohlwa uketshezila wonke lawa mathuluzi nezitsha. Ngalokhu, ukuphuza utshwala kufanelekile. Ungenza futhi lokhu nge-sterilizer yamabhodlela wezingane. Futhi inzalo yembiza, lapho uzosakaza khona ukhilimu ophelile!
Ukhilimu wasekhaya ugcinwa isikhathi esingaphezulu kwesonto, futhi kuphela esiqandisini. Ungapheki ngaphezu kuka-20-30 ml ngesikhathi. Emva kwakho konke, okokuqala, lokhu kungukukhathazeka njalo - njalo ngesonto kufanele wenze isabelo esisha. Okwesibili - kukhona ithuba lokudala: akuzange kusebenze ngalesi sikhathi, esikhathini esizayo ngizoshintsha iresiphi, futhi ngesonto ngizozama isithako esisha. Kungcono ukuqala ngekhilimu hhayi ubuso, kodwa ngomzimba noma ngezandla. Futhi ngokuzama kokuqala, ingxube yamafutha ifaneleka kakhulu - ukuhlanza, ukulwa nokuvuvukala noma okunomsoco.
Ekuqaleni komsebenzi wakhe, u-Esti Lauder uqobo walungiselela futhi wafaka izikhwama kumthengi ngamunye. Ngobunye ubusuku iklayenti elethukile lambiza: umninindlu wakhe, edidekile izimbiza, wahlobisa ikhekhe nge ukhilimu we-culinary, futhi ephethe ukhilimu wokunakekelwa! Kwavela ngemuva kokudla kwesidlo sakusihlwa, lapho ummemezeli ekhuphukela esiqandisini sezimonyo.
U-Lauder wamqinisekisa lo wesifazane: "Akukho okuzokwenzeka kuzakhamuzi zakho, ukhilimu wenziwa ngemikhiqizo yemvelo." Ngempela, akukho ukunambitheka, noma umbala, noma iphunga lama-curls ayisikhilimu, akuzange kuhlaziye izivakashi, futhi akekho owakhononda ngempilo. Lo mlando namuhla uyasebenza ngangokunokwenzeka. Kunengqondo ukukhumbuza kaningi futhi abathintekayo izimonyo zasekhaya, nabasekeli bezimboni, abaxosha "emvelweni", bexuba ama-creams esitofu. Ukuzingela ukuhleka kuyanyamalala ngokushesha lapho uqaphela ukuthi u-Estee Lauder ngokwakhe uqale ukwakha umbuso wakhe omkhulu wezithokozi kusuka ezikhwameni zasekhaya. Kodwa ngenxa ye-amateur naturprodukta le-anecdote yomlando - isikhumbuzo esengeziwe: izimonyo zezimboni - ukuqhubeka kwemvelo kwemvelo. Okumele ukhethe akuyona into nje kuphela yendaba yokunambitheka. Ngempela, konke esikwenzayo kuphela, kubangele ukuletha imiphumela futhi kusenza sibe nenjabulo futhi ibe mnandi, kungakhathaliseki ukuthi isikhathi sichithwa ukhilimu owenziwe ngezandla, noma isamba samanani amane esele esitolo sezimonyo.
Uzodinga kuphela amaminithi angu-7-10 ukulungisa le ngxube yamafutha okuhlanza ebusweni. Ngaphezu kwalokho, ngalesi sikhathi kuhlanganisa ukusayina kwethegi embizeni. Kudingeka ukuthatha i-1 tbsp. l. amafutha (sunflower) okungcono kakhulu afaka ama-3-4 amaconsi amafutha abalulekile (mhlawumbe i-lavender), uhlanganise kahle. Vumela ingxube ukuba iphuze amahora angu-24 futhi isebenzise izikhathi ezimbili ngosuku - ekuseni nakusihlwa. Vele usakaze ama-3-4 amaconsi e-agent phezu kwesikhumba. I-additive (i-oyela ebalulekile) kufanele ikhethwe ngokuhambisana nohlobo lwesikhumba.
Njengoba ukwazi ukulungiselela ukuhlanganiswa kwamafutha, ungaqhubeka nalolu ukhilimu. Isibonelo, lungisa isikhilimu esiphumuzayo sokondla isikhumba esijwayelekile somzimba. Inqubo yonke izothatha cishe isigamu sehora. Uzodinga:
• 10 ml we-jojoba amafutha (anika amandla futhi anondle);
• 10 ml ibhetela ye-shea (i-moisturizes);
• 5g we-bexisi (yenza isixazululo singamelana naso);
• 10 ml amanzi amanzi e-Neroli (avuselelwa);
• Amaconsi angu-7 e-chamomile amafutha abalulekile (ukupholisa).
Hlanganisa i-wax yamanzi okugeza. Engeza ubhotela we-shea ku-wax, hlanganisa kahle. Engeza i-jojoba yamafutha, uvuselele futhi. Susa izitsha kusukela ekushiseni. Ukufudumala amanzi e-Neroli emanzini okugezela, gcwalisa ivolumu edingekayo nge-seringe bese uyifaka emanzini enhlanganisela yamafutha, evuselela njalo nge-spoon. Hamba konke nge mixer kuze kube bushelelezi. Engxenyeni ehlile, engeza ama-chamomile amafutha abalulekile. Hlanganisa ingxube futhi. I-ayisikhilimu isilungile, isele ukuyihambisa embizeni.
1. Kufanele uqale ngamafutha amaningi, okwenziwe ngamafutha: kulula ukuxuba.
2. Okokuqala udinga ukusebenzisa okungaphezulu kwezingxenye ezingu-3-4. Ngesikhathi esifanayo, kulula ukulandela ubuchwepheshe nokuqonda ngokuhamba kwesikhathi ukuthi kwenzekani iphutha.
3. Kubalulekile ukushaya ingxube kuze kube yilapho igcolile ngokuphelele, ngaphandle kobuvila. Kuphela uma kwenzeka ukhathala okukhulu ungenza ikhefu elincane.
4. Ungakhohlwa mayelana nombuso wokushisa.
5. Ungasebenzisa itiye elihlaza esikhundleni samanzi, kanye nomhluzi karkade, i-chamomile noma amanye amakhambi.
Perfume, amakha, umlando wemimoya, izingcaphuno kanye amazwi mayelana nemimoya
Indlela yokukhetha i-lipstick efanele
Okudingayo ukwazi mayelana nokwenza okuthandwayo
Izipho ezinomsoco zikaKhisimusi ezivela kuChanel nase-Armani
Kuyini iBrutalin, ukwakheka kwayo nendlela yokusebenza
Indlela yokufunda ukuthanda nokuthethelela?
Pilaf ngezimvu zamagundane
Yini izingane ezesabayo?
Ukuzivocavoca komdlalo wamantombazane
Ithonya lobufazi emndenini
Amathiphu okukhulisa izingane ezincane
Ingabe umndeni ocebile uzothatha umalokazana ompofu?